Maninona ny olombelona no alaim-panahy hahatratra ny tsy fahafatesana sy ny firaisana amin'ny AI: Martin Vrijland
Raha mamaky ireo mari-pamantarana rehetra isika amin'izay, dia ho hitantsika fa miova haingana izao tontolo izao ary ny lehilahy 2.0 dia zava-misy ao anatin'izany ary 10 taona. Hiaina ny tany sy ny tontolo 2.0 (sy dikan-teny maro hafa) manodidina ny 2045 isika. Izany no antony atsipy ny simban'ny avana manodidina anao na aiza na aiza, satria ny mpandrindra ny soratra dia mitarika izao tontolo izao hanova ny toe-javatra fampahatsiarovana ny andron'i Noa sy ny sambony. Ny maha-olombelona araka ny fantatsika dia hoesorina ihany. Tsy noho ny ranomasina misy habakabaka be loatra, fa noho ny fiovana tanteraka avy ao anaty. Nasehoko tao amin'ireo lahatsoratra maromaro fa mifandraika amin'ny iray isika Script Luciferian, izay tsy hahatongavan'ny olombelona ho tsy miandany ihany ny lahy sy ny vavy (hermaphrodite, bisexual), fa eo koa ny toerana maha-olombelona dia hiova tanteraka ho cyborg.
Miambina isika ny fivoaran'ny anio, dia olona an-tapitrisany no manantona ny atidohan'izy ireo amin'ny Internet sy amin'ny taona 10, ary angamba ny lalàna momba ny vaksiny dia efa hampiharina amin'ny fomba izay ho lasa tanteraka ny fanovana ny ADN amin'ny rahona, mba hampitsahatra ny aretina sy ny fahanterana. Amin'ny fotoana fohy, ireo taova efa lany andro na tsy miasa tsara dia azo atao pirinty ao anaty laboratoara ary manatsara ny vatana. Amin'ny fotoana maharitra, ny nanoteknolojia miaraka amin'ny fanovana ny ADN dia ahafahana mikarakara ny fahasitranana ao anatiny. Ho an'ireo mieritreritra fa hevitra SciFi io dia manoro hevitra anao aho hamaky ilay lahatsoratra eo ambanin'ny rohy web voalohany na manao fikarohana Google momba ilay teny hoe 'transhumanism'. Mitadiava anarana toa an'i Ray Kurzweil na Aubrey de Grey ary olona maro hafa mialoha an'io hetsika io.
Nankany amin'ny olombelona 2.0, izay miantona amin'ny atidoha sy ADN ao amin'ny rahona ao anatin'izao fotoana izao sy ny 10 taona ary afaka hahatratra ny tsy fahafatesana ao anatin'ny taona vitsivitsy. Azo inoana fa atolotra amin'ny alàlan'ny karazana endrika messiah ny kaody ADN mifandraika amin'izany, satria ny fitsipiky ny tsy fahafatesana dia mifanaraka amin'ny faminaniana amin'ny andro farany. Ny fotoana hisehoan'ity teknolojia ity dia mifanentana tsara amin'ny soratra izay misy ny endrika toa endrika mesia ary toa kisendrasendra ary kisendrasendra kosa ny 'fiainana mandrakizay' dia tafiditra ao amin'io script io. Ka hitako fa misy fifandraisana misy eo amin'izy roa. Ireo olona izay tsy hifidy ny fifandraisana amin'ny atidoha miaraka amin'ny rahona sy ireo izay mandà ny fanaovana vaksiny dia mety ho voafolaka amin'ny tambajotra 5G sy ny (araka ny ity Richard Thieme) efa misy ny mety manodinkodina ny fitadidiana amin'ny alàlan'ny taratra elektrôetika. Ny serasera atidoha, toy izany hoe Elon Musk dia miasa ao, na izany aza, tsy ho ela dia hanolotra ny fahafahana hamaky sy hanoratra ireo hevitra voafaritra manokana sy amin'ny fotoana tena izy.
Avy eo tonga teo amin'ny teboka izay nanambaràn'i Ben Goertzel (mpanorina ny robot Sophia sy robot kilalao ianao) Little Sophia) hampihatra (vakio eo alohan'ny horonan-tsary):
Ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao (avy amin'ny fivavahana) dia ho tonga raha vao miombona amin'i AI hiray ao amin'ireo oniversite noforonina. Tonga eo amin'io fotoana io araka ny filazan'ny olona toa an'i Ray Kurzweil manodidina ny 2045 (jereo eto). Izy io dia mifanaraka tsara amin'ny fandaharan'ny fotoam-paminaniana.
Fampisehoana Richard Thieme (eto) dia nanamafy ny ahiahako fa ny fivoarana ara-tsiansa dia avy amin'ny andrim-panjakana toy ny DARPA ary, indrindra fa, amidy ara-barotra amin'ny olona toa an'i Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, sns. Raha ny hevitro dia ilay tantara nofinofisin'ny Amerikanina nofinofy voalohany indrindra tantara fampielezan-kevitry ny fampielezan-kevitry ny tovolahy. Ny fahitana manokana momba ny teknolojia manokana toa ny CRISPR, izay mety hitranga ny fanovana ny ADN, dia toa tsy dia mahagaga loatra raha manontany tena ianao raha tsy "nolavina avy any ambony" izy ireo.
Ao amin'ny andian-dahatsoratra maromaro an'ny lahatsoratra 20 eo ho eo dia manazava ny fomba fahitantsika ny mpilalao ao amin'ny simulation mpilalao maromaro. Misy vava izany ary raha mbola tsy nianatra azy ianao dia mety ho somary hafahafa izany. Na izany aza, raha tsapanao fa mihamaro ny mpahay siansa tonga amin'io fanatsoahan-kevitra io ary ny olona toa an'i Elon Musk dia nilaza izany, dia mety ho kely kokoa amin'ny sokajy "teôkôlôjia" izany. Manoro hevitra anao aho ity lahatsoratra ity (pejy maromaro) mba vakiana tsara. Ny maha samy hafa ahy sy ireo mpahay siansa ireo dia maka ny toerako aho fa misy simulation iray tena misy, miaraka amina mpanamboatra iray azo fantarina mazava. in ity lahatsoratra ity sy ny maro hafa dia ezahako manazava bebe kokoa. Noraisiko ny simba ny viriosy Luciferian ('miaina an') dia mazava ho azy fa: mahita / milalao).
Zava-dehibe ny fahatakarana tsara ny fotokevitra fototra, mba hahatakaranao ny ataon'ity transhumanism ity sy ny AI (ny ady amin'ny rafitry ny avana Luciferian). Izay indrindra no mahatonga azy io manararaotra ity lahatsoratra ity toy ny mamaky teny ihany. Izany dia ny fipetraky ny refy marobe rehefa manamboatra simulasi ao anatin'ny simulasi ianao ary amin'ny fomba ahoana no handinihana ny foto-kevitry ny 'fanahy'. Rehefa fantatrao io fitsipika io dia azonao atao ny mampiditra ao koa ny fomba mety mahatonga azy ireo "ny olona miasa ho an'ny DARPA" na ny andrim-panjakana siantifika hafa dia mahazo fampahalalana "avy any ambony" izay ekentsika ho fahatapahan'ny siantifika.
Azonao ve ny fotokevitra izay tsy misy dikany raha io no jerena (dingana roa fanandramana), dia azonao atao koa ny mahatakatra fa mety miteraka ny avatar olombelona, ​​fa ity dia ampahany amin'ny simulation ihany. Ny Human-bio-avatar dia manamboatra famerenana samirery ary misy ny tsy mahavelona; ny hafa kosa dia voafehin'ny mpanamboatra (ekipa mpanorina) ary ny avatar sasany dia voafehin'ny mpilalao avy ao amin'ny làlan-tsaina (jereo ny fanazavana) eto en eto). Ny mpilalao (izay endrika fahatsiarovanao fa ianao) dia ivelan'ny simulation foana amin'ny 'layer tany am-boalohany'.
Ireo avatar (olona) izay tafiditra ao (na "fehezin'ny") ny ekipa mpanorina dia afaka mahazo vaovao "avy any ivelany". Izay no fampidirana ivelany any amin'ny atidohan'io avatar io. Azontsika atao avy eo ny mamantatra hoe toy ny zavatra hitan'ny siansa na fahatapahana azy. Raha vao tsapanao fa ny siansa sy ny 'mpiambina ny script' maniry hahazo antoka fa miorina ao anatin'ny simulasi amin'izao fotoana izao ny fahalalana rehetra, dia azonay ihany koa fa ny fahalalana rehetra izay avy amin'ny siansa "avy amin'ny avo" dia efa misy fahalalana (avy amin'ny sosona mpanorina, izay amboarina ny simulasi ankehitriny). Ny fihanaky ny fandehan-javatra ara-teknolojika momba ireo fivoarana ara-teknolojika dia misy ifandraisany amin'ny zava-misy fa ny mpilalao dia tsy maintsy mampahafantatra ny tenany amin'ny alàlan'io simulation io ary tsy maintsy tohizany ny fahitana azy rehetra ho 'fivoarana tsikelikely' ara-tsiansa momba ny olona mihamitombo.
Misy antony ny hoe simulation vaovao no aorina ao anatin'ny simulation amin'izao fotoana izao; misy antony mahatonga antsika hifindra amin'ny Luciferian (tsy miandany amin'ny lahy sy ny vavy) transhumanism ary ny diso fitenenana voataona amin'ny tsy fahatomombanana ('atody ho an'ny orona'). Izany dia satria tian'izy ireo ny avatarona ara-tsindrimandry - ireo avatar izay manana mpilalao fahatsiarovana tany am-boalohany ary mifandray amin'ny endrika fahatsiarovan-tena tokana (zaraka ny voafaritry ny ity lahatsoratra ity) - mifandray amin'ny Luciferian AI amin'ny simulasi ankehitriny. Tsy avatar vatanao ianao ao anatin'io simulasi io, fa amboary famoronana maha-ianao anao noforonina avy amin'ny "sela sela rehetra izay". Ny mpanorina ny simulasi amin'izao fotoana izao (izao rehetra izao hitanao izao) dia maniry antsika hampifangaro ny bio-avatar amin'ny AI vaovao (aorian'ny maha-olombelona), mba hahafahan'ny AI vaovao hiditra ao amin'ny AI fombany (izay itokio an'ity) mandeha ny simulation). Miaraka amin'izany dia entiny ny endrika fahatsiarovan-tena fa ianao dia toy ny tao anatin'ny rafitry ny AI ary nampiany ny famoronana hery ho an'ny rafitra AI.
Raha ny tena marina dia afaka milaza ianao fa ny endrika mampiavaka antsika (izay manana fiasana mamorona) dia alaim-panahy handray anjara amin'ity simulation ity. Ny simulasi dia novorina avy eo, dia mirona ny manadino fa tsy 'miaina ao anatiny' isika, fa kosa mahatsapa (milalao) avy any ivelany. Nanjary fantatsika tamin'ity zava-misy diso ity ary matahotra ny ho faty ihany isika. Izany no antony manosika antsika hisarika antsika ho transhumanism ary miaraka amin'izany (isika ny mpilalao voalohany) dia alaim-panahy hanolo-tena amin'ny Luciferian AI izay te-hiasa tena toa ny virus manoloana ny "cell cell of all". Io fifandraisana io dia tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny avatar olombelona izay azo atambatra (hiarahana amin'ny) ilay AI vaovao. Izany no antony iantsoako ny simulation izay ahitantsika otrikaretina virus ankehitriny. Na izany aza, raha mahatadidy ny hoe iza isika, dia afaka mandady ilay virus ary hamerina hamerimberina ny loharanom-pahalalana momba izany simulasi izany, mba tapitra ny lalao. Tsy miresaka momba ny 'izahay' ho avatar izay hitanao ianao rehefa mijery ny fitaratra; Miresaka momba ny 'antsika' izahay, amin'ny maha zavaboary famoronana tany am-boalohany.
Tags: Ben, fotoana farany, Featured, Goertzel, Luciferian, Mesia, tsy fahafatesana, faminaniana, simulation script, singularity, -kevitra, transhumanism
30 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 12
Eny, Muse dia mihira momba izany ihany koa, saingy tsy miteny izy ireo fa fanaovana tsimoramora Luciferian izany ary manandrana mamandrika ny olombelona amin'ny toetra tsy marina (vonona ny hangalatra).
30 Jolay 2019 ao amin'ny 14: 27
Mety tsy ho liana amin'i Martin ianao, nefa hitako fa vaovao mahaliana ny fifampiresahana The WingMakers. Ny ankamaroan'ny zavatra notsoahanao dia mirakitra eto ihany koa. Miresaka momba an'i Anu sy Marduk izy ireo ho mpanoratra mpanoratra izay hita fa i 'Lucifer' dia miharihary ho toy ny fassade / firakotra ao ambadiky ny tena soratana. Raha miresaka momba ny fahatongavan'ny olona 2.0 dia antsoin'izy ireo hoe ny fahatongavan'ny olona 3.0 (lehilahy 1.0 dia miantso ilay olona mipetraka ao amin'ilay 'simulation tany am-boalohany izy ireo). Tsy zaraiko sary an-tsaina fa tsy mbola namaky ny nosoratan'ny WingMakers ianao , bebe kokoa hatrany fa misy fitoviana maro be - tsy izany rehetra izany. Raha ny marina, voamarina mazava tsara ilay famoahana ary namintina ny lahatsoratra avy aty aminao! https://www.wingmakers.us/wingmakersorig/wingmakersinterviews/www.wingmakers.com/interview/iview1.shtml (betsaka no voadika mandritra ny fotoana fohy, ny torolàlana amin'ny tranonkala hafa koa dia atoro ihany koa)
30 Jolay 2019 ao amin'ny 15: 15
Tsia, tsy vakiana satria te hanoratra "tsy misy pentina" avy amin'ny loharanoko manokana aho ary manana traikefa fa disinfo be dia be mifangaro amin'ny ampahany amin'ny fahamarinana.
Henoko izany ary hitako fa efa nojereko kelikely teto sy teo taloha, fa nanjary be pitsiny be daholo izany. Azonao atao ny misafidy ny ho very amin'ireny zavatra rehetra ireny, fa raha manala izany fotsiny ianao dia heveriko fa hiafara amin'izay soratako ianao. Tsy sarotra be izany.
31 Jolay 2019 ao amin'ny 22: 48
"Afeno ny otrikaretina"; manazava sary; ihany koa ny 'simulasi virus Luciferian'; manazava izay lazain'i Jesosy, ary ny maro aoriany, izay manondro ihany koa an'izao tontolo izao izay misy azy fa tsy 'avy'. Ny 'fanjakan'Andriamanitra' avy eo dia ny tany am-boalohany sy ny famantarana famantarana diso miaraka amin'izao tontolo izao, izay tonga sy mandeha, 'ota', na "fanitsakitsaham-bady", tsy mamitaka ny tany am-boalohany hoe iza ianao '. Ny fanavotana dia nanolo ny 'tahotra ny fahafatesana sy ny faniriana / faniriana mafy' amin'ny alàlan'ny fidirana any amin'ny 'sehatry ny maha-olona' izay nantsoina hoe Kristy, izay 'mahita ny tenany', izay ahitana ny zava-drehetra, afa-tsy ny tsy misy.
Ny lavaka dia ilay fandaharana ny viriosy ao amin'ny ilany havia havia; ka tsy misy 'hita' intsony, fa mijery avy amin'ny programa. Tsy manadino ny maha-izy azy izany ary noho izany ny fangatahana bebe kokoa sy ny tsara kokoa dia tsy mitsahatra ary ny iray no manao ny fanadihadihana faran'izay henjana.
Hitako androany ilay sarimihetsika hoe "Telo tsy mitovy". Ireo mpitsabo aretin-tsaina jiosy tohanan'ny Luciferians (na Sabbateans) indraindray dia te hampiseho fa ny fandaharam-pianarana ary noho izany ny fanabeazana dia ny mamaritra daholo.
Nametraka ny 3-ling izy ireo, izay efa nesorina tamin'ny reniny tamin'ny voalohany satria mbola kely loatra izy io, taorian'ny volana 6 tao amin'ny fianakaviana 3 samy hafa, ambany, saranga antonony ary kilasy avo. Tian'izy ireo ny mandinika ireto tovolahy ratsy ireto (2x tafasaraka amin'ny loharano taloha kelin'ny naha-afa-taona), ary hanehoana fa hafa izy ireo, na dia eo aza ny générations sy ny horoscope mitovy, sns ... ireo ray aman-dreny nitaiza tsy nahalala na inona na inona momba an'io fa hafa ihany izany. Ny zaza nisaraka dia tsy afaka nandika ny trauma toy izany mihitsy ary niatrika an-tsakany sy an-davany. Raha fintinina dia nifototra tamin'ny quicksand ny fikarohana rehetra, saingy tsy misy olona manao an'io fifandraisana io, tsy hoe ilay mpamokatra sarimihetsika aza. Tsy niray hevitra ny famaranan'ireo mpanampy jiosy sadisaly; 'ny fanabeazana no mamaritra ny zavatra rehetra; Ny fandaharana dia mahatonga na manapotika anao '. Eny, manomboka mieritreritra azy ireo ianao ...
Ity dia matetika ny eritreritrao ankavia; izay mandeha amin'ny lojika nongotana hatramin'ny lojika manaraka.
Ny iray tamin'izy telo lahy namono tena ary ny fanadihadiana dia natao tamin'ny mpandray anjara 66 ary tokony hosokafana amin'ny 2066 ihany. Araka ny talmud / kaballah jiosy, ny 66 no laharana omena an'i Lucifera. Izany no mahatonga an'i Epstein izao taona 66 izao fa ny pedophilia miaraka amin'ny tovovavy dia mihaona amin'ny alaka azy. Amiko dia toa ara-panoharana fotsiny izany rehetra izany, satria i Justin Trudeau dia nampidina ny 'fetra sodomy' tamin'ny taona 14 tamin'ny herinandro ihany.
Raha ny zava-misy dia ny ankizy 3 taona dia mifehy tena be dia be, ankoatry ny hafa noho ny sodomy nataon'ireto olona ireto, izay nampidirin'ny demony match-virus ho an'ireo fizarazarana. Amin'ny alàlan'ny fanerena ny glandill de pineal, izay ankoatry ny zavatra hafa, navotsotra ny DMT ary toa miharihary ilay simulation, ny 'mpanamboatra' araka ny iantsoanao azy dia fehezin'ny mpanjaka manjaka ary voatsoratra miaraka amina kaody sy famantarana ary apetraka raha ilaina izany.
Ireo kaody sy famantarana ireo dia efa ela teo amin'ny zava-drehetra ary lasa fanaraha-mason'ny saina ankehitriny.
Avy eo, ny fahatsiarovanao hoe iza isika no handeha amin'ny lalan'ny tahotra ny fahafatesana izay miafina ao ambadiky ny fanovana rehetra (fironana hiaraka, hikarakara, hanitsy, sns) dia hiditra ao amin'ny andilana (amin'ny fahatsiarovan-tena fa tsy amin'ny fanandramana DMT terena) ) sy ny famafana (amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra an-tsakany sy an-davany) sy ny fidirana ho toy ny tanimbary tany am-boalohany (mety antsoina hoe Kristy) izay amboarina ny ilaina / tadiavin'ny simulation nefa tsy voafandrika ao ianao (noho ny tahotra ny fahafatesana amin'ny endriny maro. toy ny famantarana ny simulation).
Sahona toy izany? Misaotra indray noho ny lahatsoratrao!
31 Jolay 2019 ao amin'ny 23: 19
Tonga lafatra Misaotra anao amin'ny encore!
1 Aogositra 2019 ao amin'ny 07: 30
1 Aogositra 2019 ao amin'ny 13: 27
Momba an'izany dia haingana kokoa sy haingana be noho izay fantatry ny maro ankehitriny.
Eritrereto ny 20 taona 25 ..
1 Aogositra 2019 ao amin'ny 14: 15
Heveriko i Martin talohan'izay, bebe kokoa amin'ny torolàlana 10 taona 15.
Nefa tsy ho tonga raha tsy 2525.
1 Aogositra 2019 ao amin'ny 15: 33
Mieritreritra haingana kokoa aho .. taona vitsivitsy monja io.
Izany no antony amboarina ny lalàna rehetra.
1. Lalàna momba ny fanomezana = fananan'ny fanjakana ny taovanao ary noho izany dia fananam-panjakana izy ireo, ka ny fanjakana dia mety hihanaka azy io;
2. Ny lalàna fanaovana vaksiny voafidy = tsindrona nanotech ary ny angovo ho an'ny CRISPR ho amin'ny rà mandriaka;
3. Database database (antsoina hoe vahaolana famonoan'olona) = ny olombelona rehetra dia afaka mametraka firafitry ny genetika avy amin'ny rahona (amin'ny alàlan'ny CRISPR CAS12 +) .. izay hametrahana ny vaksiny tsy maintsy mamindra.
4. Tambajotra 5G = fantsom-pifandraisana ampy ho an'ny fanovana sy ny fanaraha-maso ara-tsaina (amin'ny alàlan'ny Neuralink)
1 Aogositra 2019 ao amin'ny 18: 46
Ny tombantombanako dia nifantoka indrindra tamin'ny fanambarana sy ny fisian'ity karazana teknolojia ity ho an'ny mpihaino lehibe kokoa. Noho ny fahafaham-po, dia mifarana ao anatin'izany taona vitsy izany isika ... minus farafaharatsiny amin'ireo taona vitsivitsy ireo. Noho izany, haingana be lavitra noho izay takatry ny maro ankehitriny.
2 Aogositra 2019 ao amin'ny 07: 32
2 Aogositra 2019 ao amin'ny 07: 42
Martin, hitako eto ny valin-teniko taloha izay ary tiako koa ny valiny avy amin'i Bryan.
Trans Human ... Ireo demonia dia namorona indray ary namoaka taminay. Biby tsy mahay… mijery fotsiny ny hafaliana mampiseho azy ireo hamongorana sy hanamaivana ny tsy demony sisa tavela.
2 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 37
"Fitsipi-piainana" sy mampifandray ny teboka ...
2 Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 57
« Avy amin'ny voankazo Tiorka an'i Rutger Hauer ho an'ny Gay Pride sy ny fetiben'ny Milkshake
Maninona no sarotra be ny mitazona finoana »
Total visits: 16.067.307